नेपाल आयात गरिएको तेल भारततर्फै, आयल निगमकै ट्यांकरबाट भैरहेछ तस्करी ! – Avenues Khabar
नेपाल आयात गरिएको तेल भारततर्फै, आयल निगमकै ट्यांकरबाट भैरहेछ तस्करी !
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १२:१८ मा प्रकाशित
काठमाडौं : पर्सा जिल्लाको सिमावर्तीस्थित भारतीय बस्तिमा भारतीय इन्धन तस्करको अनेक धन्दा चल्छ । उनीहरुको प्रमुख काम हो नेपालबाट पेट्रोलिएम पदार्थ तस्करी गरेर भारत लाने अनि बेच्ने । वीरगञ्जका पेट्रोल पम्पहरुमा सवारी साधन भन्दा जर्किन र ट्यांकी बोक्नेको भिड लाग्छ । उनीहरु सबै भारतीय इन्धन तस्करहरु हुन् । बोराले छोपेर मोटरसाइकलमा हालेर भारत तर्फ निर्वाद इन्धन ओसार पसार भैरहेको छ ।
अनि भिडियोमा दृश्य हेर्नुहोस्, पेट्रोलिएम पदार्थमा शुद्धता नेपाल आयल निगम लेखिएको ट्याङ्कर भारत रक्सौलको रेल लिगसँगै छ । भारतमा इन्धन भर्न गएको नेपाली ट्याङ्करबाट धमाधम भारतीय तस्करहरुले तेल भर्दै छन् । अनि भिडियोमा अर्को दृश्य पनि हेर्नुहोस् त्यसमा पनि नेपाली ट्यांकरबाट भारतीय तस्करहरुले इन्धन झिक्दै छन् । यी दृश्यहरु हेरेपछि सहजै भन्न सक्छौं कि नेपाल आयात गरिएको इन्धन भारतमै तस्करी भैरहेको छ । अझ त्यसमाथि भारतीय तस्करहरुलाई नेपाली तस्करको भरपुर सहयोग छ । यति सम्मकि नेपाल आयल निगमको काम गर्न जाने नेपाली ट्यांकरहरुले नै हाम्रो इन्धन भारत तर्फ तस्करी गरिरहेका छन् । हो नेपालको सस्तो तेल भारतीय तस्करको अनेक खेल । नेपाल भारत सीमामा नेपाली इन्धनको निक्कै ठुलो खेल चलिरहेको छ ।
दर्शकबृन्द बिरगंज बोर्डर त उदाहरण मात्र हो । भैरहवा बोर्डर, बिराटनगर बोर्डर लगाएतका हरेक बोर्डरमा भारतीय तस्करको धन्दा निक्कै चलेको छ । नेपालमा भन्दा भारतमा निक्कै महँगो छ पेट्रोल र डिजल । त्यसैले नेपालको इन्धनमा भारतीय तस्करको आँखा लागेको छ । नेपाल आउने पेट्रोल पम्पमा भाँडा भर्ने र मोटर साइकलमा बाँधेर भारत तर्फ खुलेआम तस्करी गर्ने , यो धन्दा अहिले निक्कै फस्टाएको छ सिमामा । भारतीय तस्करको बास अहिले नेपालमा छ किनकि नेपालमा निक्कै सस्तो छ इन्धन ।
नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर ११४ रुपैया ५० पैसा पर्छ भने भारतमा १४६ रुपैया ८१ पैसा छ, भारत भन्दा नेपालमा पेट्रोल ३२ रुपैया सस्तो छ । त्यस्तै नेपालमा डिजल प्रति लिटर ९५ रुपैया ५० पैसा छ भने भारतमा १३६ रुपैया ९३ पैसा छ। भारत भन्दा नेपालमा डिजल ४१ रुपैया ४३ पैसा सस्तो छ । त्यसैले सिमावर्ती हाम्रा बजारका पेट्रोल पम्पमा भारतीय तस्करको लाइन लाग्छ । अनि खुला सीमाको फाइदा उठाउदै धमाधम हाम्रो इन्धन भारतमा तस्करी भैरहेको छ । भारतीय तस्करको सिमामा नाङ्गो नाच छ तर हाम्रा निकाएहरु टुलु टुलु हेरेर बसेका छन् अनि तै चुप मै चुप छन् ।
भारतबाट ल्याइएको तेल पुनः भारततिरै
नेपालको सीमा क्षेत्रबाट भारततर्फ तेलको तस्करी मौलाएको छ । भारत भन्दा नेपालमा इन्धन निक्कै सस्तो भएपछि नेपालबाट भारत तेल तस्करी गर्ने गिरोह अहिले निक्कै सक्रिय छ । नेपाली ट्यांकरहरु अहिले नेपालको तेल भारतमा तस्करी गरिरहेका छन् । सीमा क्षेत्रबाट भारतीय सवारीहरु गाडीमा तेल भर्न नेपाल आउने क्रम बढेको छ ।
जसका कारण भारततीय सीमा क्षेत्रका पम्पको कारोबार ५० प्रतिशत घटेको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । ड्रम र ग्यालेन ल्याएर तेल भरेर भारतका बजारमा बिक्री गर्ने समूह नै मात्र हैन नेपाल अयल निगमको टैकर बाट समेत तस्करी गर्ने समुह पनि सक्रिय छ अहिले । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले केहि दिन अघि वीरगन्ज महानगरपालिका २२ जगरनाथपुरमा रहेको स्वेता आयल ट्रेडस बाट ना ७ ख १५७१ को टयाकरले १००० लिटर र फीयुल टयांकमा ३६० लिटर डिजेल भरी अबैधरुपमा चोरी गरी सुख्खा बन्दर गाह बीरगन्जको मुल गेट बाट भारत लैजानन खोज्दा चालक राम कृष्णा उप्रेती. सहचालक अशोक पाख्रिन र स्वेता आयल ट्रेडसका मुन्सि शम्भु महतोलाई पक्राउ गरेको थियो ।
यो घटना उदाहारण मात्र हो नेपाल आयल निगमको गाडीहरु वीरगञ्ज भन्सार र सुख्खा बन्दर गाह आई सि पि बाट मात्र भारतको रक्सौल भएर तेल लिन जाने गर्छन । काम तेल लिन जाने भएपनि उनीहरु भारतीय तस्कर संग मिलेर दिनहुँ नेपालको तेल भारत लागिरहेका छन् ।
यो विषयमा पर्सा प्रहरी जानकार छ । तर त्यो रोक्न कत्ति पनि सकेको भने छैन । हामीले पर्सा प्रहरी प्रमुख बेल बहादुर पाण्डेलाई सोधेका छौं, नेपालबाट हाम्रो तेल भारत तर्फ तस्करी भैरहँदा के हेरेर बस्नुभएको छ । उनको जवाफ आउँछ हामीले कारवाही गरेका छौं ।
हो प्रहरीलाई तेल तस्करीको बारेमा सबै थाहा छ , यसो कहिले काहीँ तस्कर समात्छ पनि । तर प्रहरीले तस्करी घटेको भनिरहँदा नाकामा देखिने दृश्यले त्यो भनाइ झुट सावित गरिदिएको छ ।
यो विषयमा बुझ्न हामी नेपाल आयल निगम बीरगन्ज शाखामा जादा अधिकृत मनोज ढकाल र अन्य कर्मचारी आफनो कार्य कक्षमा देखिएनन् ।
हो अधिकांश समय खाली हुन्छ यो कार्यालय । त्यहाँ देखिएका एक दुइ जना कर्मचारी पनि हामी संग बोल्न मान्दैनन र कुनै जानकारी नै दिँदैनन् ।
हो जिम्वेवार कार्यालयको प्रमुख र कर्मचारीहरुको लापरवाहीकै कारण नेपालको लागी भारतमा इन्धन लिन जाने ट्याङ्करहरु बाटै नेपालको इन्धन भारतमा तस्करी भैरहेको छ । एस्तो भएपछी कतै नेपाल आयल निगम पर्सा शाखाकै हाकीम र कर्मचारीहरुको मिलि भगतमा नेपाली तेल भारत तर्फ तस्करी भएको त हैन ? भनेर शंका गर्ने कि नगर्ने त ।
भारतबाट नेपाल ल्याइएको तेल फेरि भारत तर्फ नै किन तस्करी भइरहेको छ ? नेपालबाट तेल तस्करी हुनुको एउटा मात्रै कारण छैन । सतहमा देखीने एक मात्रै कारण भारतमा भन्दा नेपालमा तेल सस्तो हुनु हो भने । तेल तस्करी हुनुका थुप्रै कारण छन । एक नेपाल भारत बिचको खुल्ला सिमाना अर्को नेपाल आयल निगमको बजार अनुगमन फितलो हुनुनै हो । खुला सिमानाको फाईदा उठाउदै सीमावर्र्ती क्षेत्रका इन्धन तस्करहरुले नेपालका पेट्रोल पम्पबाट सस्तो दाममा इन्धन खरिद गरी महंगो दाममा भारततर्फ लगेर तेल बेचिरहेका छन् ।
तेल तस्करहरुले पहिले साइकल, मोटरसाइकलमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी गरेको पाइन्थ्यो भने अहिले त भारततर्फ इन्धन बोक्न जाने नेपाल आयल निगमको ट्यांकरबाटै भारतमा तर्फ ईन्धनको ठुलो मात्रामा तस्करी भइरहेको छ । भने भारतबाट नेपाल भित्रिएको तेल किन भारत तर्फै तस्करी हुन्छ त ? प्रश्न गम्भिर छ । भारत बाटै ल्याईएको तेल नेपालमा निक्कै सस्तो । भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल डिजेलमा प्रतीलिटर झण्डै ३५ देखी ४० रुपैयाँ सस्तो पर्छ । त्यसो त भारत बाट ल्याएको तेल नेपालमा किन सस्तो भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर भारतमा विभिनन शिर्षकमा सरकारी कर महंगो तिर्नु पर्ने भएका कारणले नेपाल भन्दा भारतमा पेट्रोल प्रतीलिटर ३५ रुपैयाँ २९ पैसा महंगो पर्छ भने डिजेल ४१ रुपैयाँ ४३ पैसा महंगो पर्छ । भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा तेल सस्तो पर्ने भएपछि नेपाल बाट तेल तस्करी भएको हो । हामीले भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा यसरी खुलेआम तेल तस्करी भइरहेको दृष्य हाम्रो क्यामेरामा कैद भए पछी किन तस्करी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न लिएर पर्सा स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यलय पुगेका थियौं तर कार्यलयमा कोही पनी कर्मचारी थिएनन् । भएका पनी बोल्न मानेनन् त्यसपछि हामी त्यही प्रश्न बोकेर काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यलय पुग्यौं आयल निगमका प्रवक्ताको यो भनाइ पनी हेर्नुहोस् :
नेपाल आयल निगमले पनि समय समयमा इन्धनको मुल्य समायोजन गर्दै आइराखेको छ। माघ ५ र २८ गते बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ४ फागुनमा पुनः ४ रुपैयाँ बढेको छ  । उपत्यकामा पेट्रोल १ सय १४, डिजेल तथा मट्टीतेल ९५ रुपैयाँ र हवाई इन्धन ६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । मुल्य समायोजन गरे पछि पनि निगमलाई इन्धन कारोबारमा नोक्सान हुने निगमको दाबी छ । तर सधै घाटामा ब्यापार गर्नु परेको भन्दै रोईलो गर्ने नेपाल आयल निगमले नेपाल भित्रिएको ईन्धनमा खुलम खुला तस्करी हुदा समेत टुलुटुलुु रमिता हेरेर बसिरहेको छ । गत मंगलबार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि पनि भारतको सीमावर्ती क्षेत्रको तुलनामा नेपालमा पेट्रोल ३५ दशमलब २९ र डिजेल ४१ दशमलब ४३ रुपैयाँ सस्तो छ । दक्षीण एसीयाली देशहरुको पेट्रोलीयम पदार्थको मुल्य हेर्ने हो भने चिन, भारत, बंगलादेश भन्दा नेपालमा सस्तो रहेको छ ।
दक्षिण एसियाली देशहरुमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य यस्तो छ :
भारतमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा
बंगलादेशमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १२२ रुपैयाँ २५ पैसा
चीनमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ११९ रुपैयाँ ५८ पैसा
नेपालमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ११४ रुपैयाँ ५० पैसा
श्रीलंकामा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ९६ रुपैयाँ ४१ पैसा
पाकिस्तानमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ८१ रुपैयाँ ८२ पैसा
भुटानमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ७९ रुपैयाँ २९ पैसा
हालको मूल्य अनुसार भारतमा प्रतीलिटर पेट्रोलको मूल्य दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा सबैभन्दा १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा महंगो रहेको छ । भने भुटानमा सबैभन्दा सस्तो ७९ रुपैया २९ पैसा छ । त्यसैले त तस्करहरु नेपाल भित्रीएको ईन्धनलाई अहिले भारतको सीमावर्ती बजारबाट मोटरसाइकल, कार, जिप, भ्यान, ट्याक्टहरुले नेपालको पम्पमा आएर तेल भर्ने गरेका छन्।  त्यति मात्र होईन पछिल्लो समय त ड्रम, जर्किन लगायतका भाडोहरुमा समेत भारतीय सवारी साधनले नेपालको तेल लैजान थालेका छन् ।
हो नेपाल आयल निगमले स्थापना कालदेखि निरन्तर अहिलेसम्म भारतीय आयल करपोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले आफू संग कन्ट्राक्ट गरेका १८ सय ९३ भन्दा बढी ट्याङ्करहरु मार्फत भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दछ भने त्यसरी नेपाल भित्रिएको इन्धनलाई १५ सय ६३ वटा निजी स्वामित्वका ट्याङ्करहरु मार्फत खुद्रा बिक्रीको लागि नेपाली बजारमा तेल पठाउछ । हाल नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको माग वार्षिक १ दशमलब ९ मिलियन टन रहेको छ र यसको माग प्रतेक वर्ष वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढ्दो अवस्थामा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अस्वभाविक रुपमा बढेको छ ।
झनै बढ्यो आयात
लोडसेडिङ हटेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्नुपर्नेमा झनै बढ्दो अवस्थामा छ । भारतीय बजारबाट ईन्धन नेपाल भित्रिने र नेपाल भित्रिएको ईन्धनको भारततर्फ तस्करी हुने कारणले नेपालमा पेट्रोलियम पर्दाथको आयात बढिरहेको छ । उता पेट्रोलियम पदार्थ आयातको कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमलाई पनि आयात अत्याधिक बढ्दा त्यसको व्यवस्थापन गर्न धौ धौ परिरहेको छ । अहिले त झन् पेट्रोलियम पर्दाथको आयात वार्षिक २० प्रतिशतका दरले बढेको छ । २, ३ वर्ष पहिले सम्म यस्तो वृद्धिदर करिब १०, १२ प्रतिशत मात्र हुने गर्थो ।
तर पेट्रोलियम पदार्थको आश्चर्यजनक रुपमा आयात किन र के कारणले बढेको हो भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म ईन्धनको नेपाल आयात गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल आयल निगमले कुनै ठोस अध्ययन अनुसन्धान नै गरेको छैन । तर, आयात अस्वभाबिक रुपमा बढ्नुमा केवल माग बढ्नु मात्रै भने जिम्मेवार देखिँदैन। पछिल्ला गतिबिधीलाई नियाल्ने हो भने आयात बढ्नुको मुख्य कारण भारततर्फ हुने तेलको तस्करी नै हो । भारतमा भन्दा नेपालमा तेल सस्तो भएका कारण तस्करी बढेको भन्दै भारतीय आयल कर्पोरेसनले समेत नेपालमा ईन्धनको मूल्य बढाउन अप्रत्यक्ष दबाब दिन थालेको छ र त आयल निगमले महिना दिनमा तीनपटक इन्धनको भाउ पनि बढाइ सकेको छ ।
सोमालिया आत्मघाती आक्रमण: छ जनाको मृत्यु
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १९:२२
सोमालियाको राजधानी शहर मोगादिसुको…
हिरासतमा रहेका जुवाडे छुटाइदिने भन्दै एक लाख रुपैयाँ लिने पक्राउ
२६ आश्विन २०७७, सोमबार ०९:२४
सिरहा : प्रहरी हिरासतमा रहेका जुवाडे छुटाउन…
नेपाल-खनाल समूहद्धारा काठमाडौंमा समानान्तर कमिटी घोषणा
२२ चैत्र २०७७, आईतवार १८:००
काठमाडौ । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल-…
फ्रान्समा एक ग्रीक अर्थोडक्स पादरीमाथि गोली प्रहार
१६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:५३
एजेन्सी : फ्रान्सको लियोन शहरमा बन्दुक…
नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार १८:४३
आत्महत्याका घटनामा वुद्धि हुँदै
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार १८:५३
प्रजातन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीको आह्वान : राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न एकजुट होऔं
७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०८:५८
ताम्राकार हाउस अवैध मोबाइलको अखडा ! यसरी हुन्छ तस्करी (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौं : काठमाडौंको न्यूरोडस्थित रहेको देशकै निक्कै ठुलो मोबाइल बजार हो ताम्राकार हाउस । यहाँ दर्जनौ…
युरेनियम विधेयक रातारात पास हुँदै
काठमाडौं : सरकारले युरेनियम विधेयक रातारात पास गर्न लागेको छ । सरकारले युरेनियम विधेयक पास गरेर विदेशी…
काठमाडौं : पोखरा, देशको प्रमुख शहर र गण्डकी प्रदेशको राजधानी । यो भैकन पनि पोखरामा सर्वाधारणको लागि…
मेगा बैंकको मेघा धन्दाको मेघा पर्दाफास, खराब कर्जा प्रवाहमा मेगा अग्रस्थानमा
काठमाडौं : पर्सा जिल्ला वीरगंज महानगरपालिका घर भई हाल काठमाडौं वडा नम्बर २७ बस्ने उत्तम कुमार मेगा…
युवकको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा एकै घरका ३ जनालाई पक्राउ
सर्पको टोकाइबाट एक महिलाको मृत्यु
श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ
राष्ट्रपतिलाई शम्भु थापाको प्रश्न- सांसदहरुको अधिकार हनन् गर्ने.. हु आर यु ?
नेप्सेमा पुनः ५१.६५ अंकको गिरावट
२४२१ जना संक्रमित थपिए, थप ८१ जनाको मृत्यु
कपिलवस्तु – कपिलवस्तु…
काठमाडौ । वरिष्ठ…
युट्युबमा भाइरल सन्तोषीको दक्षिणकाली मन्दिर परिसरमा क्रुर हत्या
जातको कारण कोठा नदिएको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटी थुनामुक्त